ရွာအရေးမောင်ရှမ်းဘယ်လိုတွေးသည်(နိဒါန်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာအရေးမောင်ရှမ်းဘယ်လိုတွေးသည်(နိဒါန်း)
Posted by ရွမ္းျပည္သား(ေတာင္ပိုင္း) on Jun 28, 2012 in Creative Writing, Think Different | 20 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူရဲ့ပါတီဝင်များမဲအများအပြားရရှိပြီးနိုင်လာတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကလဲ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ
(ခ)အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာဟာ တစ်သိန်းလောက်မှပြေလည်နိုင်မယ်ဆိုပြီး ကုမ္ပဏီအလုပ်သမားတွေကဆန္ဒုပြ…..
(စကားချပ်-ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှာတကယ်ကိုတာဝန်ယူသင့်တာကတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတို့ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်လူမျိုးများကအဝင်ခံလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်မွှေးတဲ့မီးကိုကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ကြသူများသာအပြစ်တင်ကြပါလေ)(မှတ်ချက်-လူမျိုးရေးခွဲခြား
နိုင်ငံတကာကလဲ အရှိန်အဟုန်နဲ့ရင်းနှီးမယ့်၊ကူညီပေးမယ့်ကိစ္စတွေဟာ အရှိန်လျော့ကျတုံ့ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်
လက်တွန့်သွားတော့တာပေါ့ အခုရေတွင်းတူးအခုရေကြည်သောက်ချင်တာတောင်မဟုတ်ပါဘူး ရေတွင်းမတူးပဲရေကြည်ရေပေါက်ကို
ကချင်ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားအရေးတွေမှာလဲ ကိုယ့်ဒေသကိုယ်စိတ်ကြိုက်အုပ်ချုပ်မယ်လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်အတိုင်းချဉ်းသွား
“နိဒါန်းပင်ရှိသေးပါကြောင်း” မို ့လို့ဖတ်ရတာ အားမရဘူး။
စွမ်းအင်၊ စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး …….စသည်..စသည်များကို
တစ်ခုချင်းစီ ခွဲလို ့ရရင်ခွဲပြီး အကျယ်တဝင့် ရေးပေးပါလားဗျာ။
လောလောဆယ် ကိစ္စတစ်ခု ရှင်းချင်ပါတယ်
သမီး နေ့စဉ် ကျောင်းတက်ရ စာသင်ရတာ အဆင်မပြေပါဘူး ခဏခဏ ခလုပ်တိုက်၊ လျှာကိုက် ဖြစ်နေရပါတယ်။ ပါပါးကတော့
ဒါတွေက ရှေးယိုးအယူတွေ သမီးဖာသာ နမော်နမဲ့ နိူင်လို့ဆိုပီး ဆူပါတယ်။ သမီးကို ပါပါးဆူရင် အရမ်းကြောက်ပါတယ် တော်ကြာ ပါပါးက သမီးကို စိတ်ဆိုးပီး ဖြတ်ရင်(မုန့်ဖိုး) အဆင်မပြေပါဘူး။ ခုမှဘဲ ဒီဆိုဒ်ထဲ ဝင်မှ သမီးကို ပြစ်မှားနေတဲ့ လူပေါင်းစုံ အကြောင်း သိရပါတော့တယ် စိ်တ်လဲကောင်းမိပါဘူး အမှန်က ပါပါး မျက်နှာထောက်ပီး သမီးကို ညီမလေးလို တူမလေးလို စောင့်ရှောက်ကြရမှာပါ ခုတော့ အကြိမ်တိုင်းလိုလို နေ့စဉ်အမျှ စော်တကစ်မော်ကား ခံနေရပါတယ် …. အာဟင့်
သမီး ဒီကိစ္စကြောင့် ပါပါးနဲ့ စိတ်ဆိုးပီး လမ်းခွဲလိုက်ပါဘီ(သားအဖ အဖြစ်မှ) ….. ….
ခုလည်း သမီးချစ်သူ ကိုဖီအာအံနဲ့ သမီးဂျီးတော်ကြီး အဲလိဇဘက်ရီးခင်လတ် ရှိရာ အင်ဂလုံကို ထွက်သွားပါဘီ မပိုင်တဲ့ဘဝမှာ မဆိုင်သလိုသာ နေရစ်ဖို့ ပြောခဲ့ချင်ပါတယ်….. အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်
စတွေးခွက်မှာ ပက်လက်မျောရာမှ ရုန်းထွက်ခဲ့သူ
ဆပ်ဆလူးပစ်ဘူး ( သကြီးသမီးအငယ်မ)
ဪမေ့လို ပါပါး ဆိုဒ်မှာ ပါစင်နယ် ဝင်ရေးသလို ဖြစ်လို့ အတည်မန့်ခဲ့ပါတယ်
(၁) ရခိုင်မှာ ပေါ်လစ်တီကယ် ခရိုက်ဆစ်လုပ်တာများ ဝက်ဝက်ကိုကွဲလို့
(၂) မော်ဒန်မမတွေ ချက်ဖော်၊ ဗိုက်ဖော် အကုန်ဖော်ပီး နိူင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းနေပါဘီ၊ နေရှင်နယ်လိဒ်ကို ကပ္ပလီတွေ ရောက်လာမှဘဲ လေးဘလက်ပို့စ်မှာပါတဲ့ ဟိုဆေးက အချိန်ကိုက် ပေါ်လာတော့တယ် အော် အနိစ္စ
(၃)နဲ့(၄) တကြောင်းထဲကို နှစ်ကြောင်းခွဲပီး မမန့်တော့ပါဘူး ဆယ်တန်းမှာ မြန်မာစာအားနည်းမှန်း လူသိပါတယ် (စကားပြေရေးရင် ဝါကျတွေ အလီလီခွဲပီး စာပိုဒ်ကြီးအောင် လုပ်တဲ့နည်း သမီးတို့ ဟားဗတ်စ်မှာတော့ မရှိ)
(၅) လမ်းတွေ ကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ လမ်းကြေး၊ ဂိတ်ကြေး၊ တန်ပိုကြေး၊ မြို့ဝင်ခွန်၊ ဘီးခွန်၊ ဘီးလှိမ့်ခွန်တွေ များလာတော့ ကိုယ့်အိမ်က ထွက်ရင်တောင် မလုံမလဲ ခိုးချောင် ခိုးဝှက်သွားရမလို ဖြစ်နေပီ လမ်းကြောမှာ ဘာမှမတွေ့တောင် အလှူခံကလဲ မလွတ်တော့ သမီးကို ကြိုက်ခိုက်နေတဲ့ မင်းသား(ဇာတ်) ရေဖြဲတိုက် အမ်းထားတဲ့ Porche 911 GT တောင် ထုတ်မစီးရဲလို့ မီနီစကပ်ကို ပေါင်ကြားမှာ စတီးချိုင့်ထားပီး လမ်းထိပ်က ဟိန်းပေယံရဲ့ ဆိုက်ကားဘဲ စီးနေရပါတယ်…………….သွပ်..သွပ်
ဘစ်ကနီကို သတင်းစာနဲ့ အုပ်ပီးပြေးပီ …………….. ပလစ်..ပလစ်
ဒါတောင် အမှိုက်ပုံနားမှာ အီးပါပါရာဇီ တယောက်က ကင်မလာကိုင်ပီး စောင့်နေလေရဲ့
ကျနော်တို့လို ပြည်သူပြည်သားတွေ မျက်စိပွင့် သွားအောင်လို့ ဥရောပ တခွင်ပြဲပြဲစင်အောင် ပို့ပေးစေလိုကြောင်း
နေရှင်နယ်လိဒ်ကို ကပ္ပလီတွေ ရောက်လာမှဘဲ လေးဘလက်ပို့စ်မှာပါတဲ့ ဟိုဆေးက အချိန်ကိုက် ပေါ်လာတော့တယ်
ကပ္ပလီတွေ ကြောင့်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော် .. မသကာ တရုတ်တွေဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တယ် ..
ကပ္ပလီ နဲ့ တရုတ် ဘယ်သူက အဲ အဲ ပြောတော့ဘူး … ဆင်ဆာမိနေမယ် .. :grin:
ဆောဒီးပါ ပိုစ်အကြောင်းမမန့် ဘဲ ဘေးရောက်သွားလို့ .. နိဒါန်းဘဲ ဆိုလို့ အလယ်တွေ အဆုံးတွေ စောင့်လိုက်ဦးမယ် ..
စာကိုယ်နဲ့ နိဂုံးကို စိတ်ဝင်တစားစောင့်နေပါမယ်ဗျား
အော် ဆိုဒ် တစ်ခုကို ဘာလို. ရွာ ဆိုပြီး ခေါ်နေပါလိမ့်နော်။
အူးကိုင် က စီအိုင်အေ က သိမ်းထားတဲ့ ဒေါ်လာအတုတွေ ပေးမလို ့ဆိုလားဘဲ ။
အော် ရွာရွာရွာ တရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာဖြစ်ပါစေ
ဟိုး အောက်ဆုံးက စာကို ကန့်ကွက်ချင်တာ ..
” သဂျီးသမက် ဆိုတဲ့စာ ”
ဖရဲသီးကလည်း သဂျီးသမက်လို့ သူ့ကိုယ်သူ ပြောဒယ် ..
ဒီတော့ သည်း သဂျီးသမက်ဖြစ်ချင်ရင် ဖရဲသီးနဲ့ အရင်ဖိုက် ..
နိုင်တဲ့လူ နာနဲ့ ထပ်ဖိုက်မယ် ..
နိဒါန်းလေးတောင်ဒီလောက်ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် စာကိုယ်နိဂုံးလေးကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် ဉာဏ်မမီလို့ မဝေဖန်ခဲ့တော့ပါဘူး ဖတ်လို့တော့ကောင်းတယ် ကိုရှမ်းပြည်သားဆက်လက်ရေးသားပါအုံး စောင့်မျှော်အားပေးနေပါတယ်။
ရွာအရေးကို နောက်မှ ပြန်လာဆွေးနွေးဦးမယ်။
လောလောဆယ် (ဥပဒေအကြံဉာဏ်များကိုတတ်စွမ်းသရွေ့ပေးနေပါသည်…. အကြံဉာဏ်လိုကကူညီခွင့်ပေးလျှင်ပေးချင်ပါသည်….. အခမဲ့အကြံပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူလိုပါသည်……) ဆိုတာကို ဖတ်မိပြီး မောင်ရှမ်းကို လေးစားသွားမိတယ်။
ကိုယ့်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ကိစ္စကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ ရှေ့နေတွေဆီရောက်တော့ ဘာမှ စကားမပြောရသေးခင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခ ၂၀၀၀ဝ (နှစ်သောင်းကျပ်) အရင်ဆုံး ပေးရပါတယ်။ ပေးပြီးမှ ရှေ့နေက စကားစပြောပါတယ်။
အဲဒီကစပြီး ရှေ့နေပညာအဖိုးတန်လှပါလားလို့ တွေးမိတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ပေးတဲ့အကြံတွေကလည်း တစ်ယောက်တမျိုးနဲ့ သူတို့ကို ရှေ့နေခေါ်ဖို့ အကြံတွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးကတည်းက ရှေ့နေဆိုတာ ငိုစား ရီစား လု့ိ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောတာ မမှားဘူးလို့ ထောက်ခံမိတယ်။